Wargaysyada Ugu Afka Dheer Horyalaada Yurub Oo Si Kala Duwan Uga Hadlay Isku Aadkii Champions League & Wargaysyada Spain Iyo France Oo Uu Calaacalku Ka Dhamaaday – Kooxda.com
Home 2017 December France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta Wargaysyada Ugu Afka Dheer Horyalaada Yurub Oo Si Kala Duwan Uga Hadlay Isku Aadkii Champions League & Wargaysyada Spain Iyo France Oo Uu Calaacalku Ka Dhamaaday
Wargaysyada Ugu Afka Dheer Horyalaada Yurub Oo Si Kala Duwan Uga Hadlay Isku Aadkii Champions League & Wargaysyada Spain Iyo France Oo Uu Calaacalku Ka Dhamaaday
Wargaysyada ugu afka dheer ee ka sheekeeya ciyaaraha ayaa si kala duwan uga fal celiyay isku aadkii wareega 16-ka ee champions league oo ay ka soo bexeen kulamo waaweyn oo uu ugu weynyahay kulamada PSG Vs Real Madrid iyo Barcelona Vs Chelsea.
Wargaysyada ka soo baxa Spain ayaa baqdin ka muujiyay kulamadii ku soo baxay saddexda kooxood ee Spain ka matalaya tartanka ee Madrid,Sevilla iyo Barcelona.
Wargayska Marca ayaa ciwaan ka dhigay” Isku aad baqdin leh oo ku aaday kooxaha La Liga” Halka Wargayska AS ee ku dhaw Madrid ay ciwaan ka dhigtay “Isku aad Sun ah oo ku soo baxay kooxaha reer Spain” Mundo Deportivo oo ku dhaw Barcelona ayaa ciwaan ka dhigtay” Laba Kulan oo waali ah” iyada oo u jeeda kulamada ay Real la ciyaari doonto PSG iyo Kulanka ay Barcelona la ciyaari doonto chelse.
Dhanka saxaafada England ayaa muujisay farxadeeda kadib markii United iyo Liverpool ku dheceen kooxo fudud oo kala ah Porto iyo Sevilla waxana uu wargayska Daily Mail Ciwaan ka dhigay“Kulanka Chelsea iyo Tottenham wuu adag yahay laakiin 3-da kooxood ee kale ayaa ku faraxsan kooxaha ay ku dheceen”.
Dhanka France wargayska L’Équipe ayuu calaacalku ka dhamaaday iyada oo ciywaan ka dhigtay” PSG oo ku dhamaysatay hogaanka Group-keeda ayaa bilaa nasiib noqotay kuna dhacday kooxda Real Madrid oo difaacanaysa koobka”.
Hadii aynu ka tagno France una dhaqaaqno Dhankaas iyo Germay Wargayska Bild ayaa ciwaan ka dhigay “Mar-Marsiyo uma Yaalo Bayern Munich kadib markii ay ku dhacday Besiktas”.
Waxa sidoo kale ka fal celiyay isku aadka wargaysyo kale oo waaweyn oo ka mid yihiin Sport oo Spain ka soo baxda,Daily Mirror oo England ka soo baxda iyo La Gazzetta dello Sport Iyo Tuttosport Oo Italy Ka Soo Baxa.